SIDA LOO KOBCIYO SWEDE XILLIGA XAGAAGA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Rutabaga - Warshadu waa dhexjir ah ee kaabajka iyo dabocase, dalkeeda waxaa loo tixgeliyaa Sweden.
Dalagga xididgan ayaa leh mid casiir leh oo jilicsan oo jilicsan, oo ah qaraabo dabocase, dabocad iyo nooc kasta oo kaabash ah.
Xeerarka loo dejinayo geela
Waa maxay swed, mar hore cad, ogaado qodobbada muhiimka ah ee beerto this xidid. Ka hor inta beerto, godadka godka ayaa si fiican u waraabiyey, xididka seedling waxaa lagu rusheeyaa isku dar ah dhoobada. Saar u dhig in qoortu ay ahayd dusha sare. Ka dib markii la waraabiyo ceelasha mar kale iyo tamping ciidda.
Geedo beerto waxay dhacdaa hal bil iyo badh ka dib markii ay beero miraha, marka geedo horey u leeyihiin laba ka mid ah caleemo. Marka la eego cimilada cimilada ee aaggaaga, mudada qiyaasta - badhtamaha May. Rutabagum waxaa lagu beeran karaa dayrta goor dambe. Iyada oo sida beerto sida guga xataa xitaa sprout sprouts qaro. Waxay u muuqdaan laba asbuuc ka hor bilawga May.
Markaad beerto geedo, dooro naftaada, laakiin waxaa jira xeerar aasaasi ah oo lagu dooranayo goob. Biyaha hoose waa in ay ahaadaan qoto dheer, ciidda waa inay ahaato mid bacrin ah, loamy ama bacaad ah, macquul ah peaty. Goobta degitaanka waxaa loo diyaariyaa horay - dayrta.
Carrada waxaa la bacrimiyey leh compost ama humus leh dheeriga ah ee superphosphate iyo cusbo potassium, oo ku saabsan 30 garaam halkii mitir labajibbaaran. Waxaad ku rusheyn kartaa ciidda leh burka dolomite ka hor inta aadan bacarin karin.
Diyaarinta beerashada abuurka dhirta
Ka hor inta biqilka, abuurka u baahan tahay in lagu dilo xal gaar ah: Shub 25 g oo toon, ku dar 100 g oo biyo ah. Ku hay abuurka isku dar ah, ka dibna raaci biyo nadiif ah oo qalalan. Si aad u biqin abuur ah, waxay ku duudduuban maro qoyan iyo hayn ilaa ay ka soo baxaan sprouts.
Sida loo beerayo dhul daaqad furan: ceelasha qoday fogaan ah 20 cm oo isku xiga, inta u dhaxeysa saf - nus mitir. Sand waxaa lagu shubay daloolka, ka dibna geedo yihiin si taxadar leh loo dhigay iyo daboolo ciid iyo compat peat.
Inta lagu jiro beeritaanka dayrta, qoto dheer ee daloolka ayaa ka samaysan ilaa 3 cm isla masaafada isku mid ah sida habka seedling ee beerto. In godka ku rid 2-3 seed. Rusheeyeen ciid iyo lakab ah compost.
Xannaanaynta iyo daryeelka ee bagalka
Horumarinta isweydaarsiga oo ka sii daraya xaaladaha cimilada diiran. Caleemaha ugu horreeya waxay ku fiiqaan heerkul ah + 3 ° C, iyo koritaanka iyo sameynta dalagyada xididka heerkulka ugu fiican waa + 16-18 ° C.
Digniin! Rutabagum si khaas ah ayuu u wareejiyaa kuleylka. Marka heerkulka hawadu ka sarreeyo + 21 ° C, miro ayaa lumiya khudaarta iyo dhadhanka.
Loosinta iyo jaridda dhirta
Daryeelka gawaadhida waxaa ka mid ah dhiraynta, dabacsan iyo hilling. Jeexitaanka waxaa lagu fuliyaa inta u dhaxaysa safarka iyo safarada isku midka ah, iyaga oo ka jaraya haramaha nafaqooyinka ka soo carrada.
Marka ugu horeysa waxay ciidda u dabacsanaa isla markiiba ka dib markaad transplanting, waxaa ugufiican in la dabciyo ka dib roobka ama waraabinta. Inta lagu jiro xilliga ay sameeyaan qiyaastii shan dabacsan ee ciidda si qoto dheer ah 8 cm. Wareegyada Spud inta lagu guda jiro muddada ugxan ah ee rosettes daboolaya caleemaha.
Xilliga xagaaga ee qallalan, waraabinta waxaa badanaa la sameeyaa, laakiin waa suurtogal in dib loo qoyo ciidda: gawaadhida ayaa kori doona biyo iyo cusub. Waxaa lagugula talinayaa in aad isticmaasho biyaha diirran oo kala go'ay waraabka.
Wixii guga iyo xagaaga, waxaad ku qaadan kartaa 2-3 quudinta, arrin baddan oo bacriminta macdanta leh. Xilliga xagaaga, waxaad ku dari kartaa xal ash ah oo lagu daro superfosphate. Quudinta this waxaa lagu fuliyaa ka dib markii waraabiyo iyo dabacsan.
Ma taqaanaa? Qaybaha soo socda ayaa faa'iido u leh horumarinta miraha wanaagsan iyo hagaajinta dhadhanka: potassium, fosfooraska, copper, manganese, boron. Fosfoorku wuxuu ku daraa macaan dhadhanka, iyo boronku wuxuu siiyaa raaxo iyo hooskii iftiin ee jidhka.
Swede waa u nugul yahay dulin ka badan cudurada. Badanaa waxaa lagu soo weeraray duqsiyada kaabajka, aphids iyo boodada. Dambe waxaa lagu diri karaa ash, oo u kala firdhiya safafka.
Qalab qallalan ee naphthalene iyo ciid webiga, hal ilaa toban, waxaa loo diyaargaroobaa duulaya kaabajka. Isku darka ayaa sidoo kale lagu kala firdhiyaa sariiraha. Nidaamka ayaa lagu celiyaa toban maalmood kadib. Gagaashka la cabbo waxaa lagu buufin karaa xalka saabuun iyo biyo, mararka qaarkood ash ayaa lagu daraa.
Waa muhiim! Si loo ilaaliyo dhirta laga bilaabo boodada jilicsan, ka dib markii laga beerto geedo yihiin budada leh ash alwaax.
Si loo yareeyo cudurka jadeecada, qashinka qoto dheer ee ciidda, buufinta ka hortagga ah iyo boodhka leh isku dhiska qalalan ayaa had iyo jeer la sameeyaa, miraha waa in la nadiifiyaa ka hor inta aan la beeri.
Uruurinta iyo kaydinta khudaarta xididka rutabaga
Haddii aad ku beeray geela isticmaalka xagaaga, miraha beeraha ayaa la goostay sida dalagyada xididada u bislaadaan. Tixgeli in midhaha waaweyni aysan marwalba firfircooneyn, oo aan dhadhanayn, ha ku daba tagin baaxadda ka dib. Xilliga qaboobaha, nadiifintu waxay bilaabataa horraanta Sebtembar, waxaad u baahan tahay inaad ku dhameysatid ka hor bilawga barafka ugu horeeya.
Dalagyada rootiga waxaa lagu goostay cimilada qoyan iyo diiran, sidaas darteed waxaa lagu keydin doonaa si ka fiican. Hooska ayaa laga soo jiiday dhulka iyadoo la hakiyey si uu u qalalo meel hawo leh. Cun khafiif ah ama mid la jajabiyey: ma aha mid ku haboon kaydinta muddada dheer.
Iyada oo dalagyada wanaagsan xididdada gooyaa dushooda, tago laba centimitir, ku rid sanduuqyada, ciid ku shub. Kaydinta geela xilliga jiilaalka waxay ku dhacdaa heerkulida illaa eber ilaa afar heerka Celsius.
Qodobbada waxtarka leh ee geela
Swede waxaa ku jira kiimiko qani ah. Kuwaas waxaa ka mid ah: borotiinka, dufanka, carbohydrateska fudud, fiber. Fiitamiinada ku jira halabuurka: Ascorbic acid, fitamiin A, B-vitamins, carotene, rutin iyo saliid lagama maarmaan ah. Noocyo farabadan oo farshaxan ah: potassium, calcium, copper, fosfooraska, birta, sodium iyo sulfur.
Ka dib dhammaan su'aasha sare ee liiska ku qoran: waa maxay jahwareer waxtar leh, waxaa loo tixgelin karaa in la xiray.
Faleebo dhalidda miraha loo isticmaalo stomatitis. Dalagyada rootiga waxaa loo isticmaalaa sidii maqaarin maqaarin ah iyo anti-barar. Soodhka warshadu waxay bogsiisaa nabarrada iyo gubashada.
Swede waxay xajineysaa saameynta saameysa, waxay u isticmaashaa qufac qallalan, cudurrada sambabada iyo bambaha.
Xilliga jiilaalka, oo leh vitamin yaraanta, swed - ilaha qiimaha fiitamiin iyo macdanta. Muddo dheer laga soo bilaabo swede siiyay dadka waayeelka ah si ay u sii wataan nolol. Iyadoo ay sabab u tahay tirada badan ee fitamiin C, ayaa si fiican uga dhexjirta hargabka iyo taageerada difaaca jirka.
Yaa ka horjoogsanaya isticmaalka swede
Swede ma laha noocyo badan oo ka hortag ah. Laguma talin in la cuno caloolleemka, boogaha, sida xididku u leeyahay content sare ee ascorbic acid.
Dhibaatooyinka kale ee mareenka caloosha iyo mindhicirrada, xajmiga khudaarta ee rutabaga ayaa ka xanaajin kara xuubka xabka. Sababtaas awgeed, laguma talin karo inaad siiso caruurta yar yar.
Xaqiiqo xiiso leh! Dalka Swiiserland, magaalada Richterswil, sannad kasta bisha November, dabaaldeg ayaa loo qabtaa caqliga. Fasaxani wuxuu u dabaaldegay sanadkiisa 2004.
Dadka xasaasiyadda xannuunsan waa inay ogaadaan halabuurka loo yaqaan 'swede': shakhsi kasta oo xakameynaya waxyaabo kasta oo ku jira halabuurka xididka waa suurtagal.